Ra ao anaty tain'alika: alika, soritr'aretina ary fikarakarana ilaina | Tontolo alika
Ny alika dia niovaova kokoa tamin'ny sakafony, izay dia nanomboka tamin'ny fahazotoan-komana tanteraka ka hatramin'ny fanekena sy fandeferana ireo karazan-tsakafo hafa ary izy ireo dia nanomboka tamin'ny fanomezana serivisy famonjena, fanaraha-maso, fiarovana ary fihazana ho lasa fitsaboana tsara sy fiarahana.
Na izany aza, mihetsika miadana miova ny natiora ary tsy azo adino ny fiaviana sy ny firongatry ny fototarazo isan-karazany. Na izany aza, maro ny olona tsy ampy ny fikarohana momba ny biby fiompy ary mety hisy vokany izany.
1 Ny fisian'ny ra ao amin'ny fivorian'ny alika
2 Ny fisian'ny ra ao anaty tain-kaninina noho ny hematochezia
2.1 Ny fisian'ny katsentsitra
2.2 Parvo virus na parvovirus
2.4 Gastroenteritis hemorrhagic
2.5 Polyps parectal
3 Ny fisian'ny rà amin'ny alika alika noho ny mana
3.3 Fahasarotana aorian'ny fandidiana
3.4 Ratra mihosin-dra
3.5 Fivontosana sy aretina
Ny fisian'ny ra ao amin'ny fivorian'ny alika
Ilaina ny hananan'ny tompon'ny alika mazava inona no ilaina sy takiana amin'ny karazany tsirairay sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fikarakarana, ny fahadiovana ary ny sakafo.
Ny fiompiana an-taonany maro no nahatonga an'io biby tsara tarehy io miankina betsaka amin'ny olombelona amin'ny fivelomana sy ny kalitaon'ny fiainana, toy ny fiankinan'ny olombelona amin'ny alika sy ny fiankinan-doha mifanaraka amin'izay ilain'ny tsirairay.
Rehefa manana biby fiompy ianao, dia tena ilaina ny mahatsapa ny fihinany sy ny fahalotoany ary ny fahazarany, indrindra ny endrika sy ny lokon'ny seza dia manome fampahalalana tena lehibe momba ny sakafo sy ny fahasalaman'ny alika.
Ny iray amin'ireo adidy lehibe ananan'ny tompony dia ny miantoka ny fahadiovan'ny toerana ihetsehan'ny biby ary manangona ny fako. Ity andraikitra ity dia manamora ny famantaran'ny tompony ny toetra mampiavaka ny dikin'ny biby fiompinao ary afaka misoroka olana ara-pahasalamana raha mahatsikaritra fa misy tsy fetezana izy ireo.
Anisan'ireo lafin-javatra izay mety handrehitra ny fanairana indrindra an'ny tompona momba ny fahalasanan'ny kaninina dia ny fisiany misy rà.
Jereo fa tonga ny tazo miloko mena mamirapiratra miaraka amin'ny endrika ranoka Famantarana izany fa misy zavatra tsy normal amin'ny fahasalaman'ny alika. Na izany aza, ny loko mena mahery dia mampiseho fa ny lesoka mety hitranga aorian'ny nandevonan'ny biby, izany hoe, avy amin'ny tsinainy, ny tsinainy ary ny kitrotro.
Raha ny seza dia a loko mena mainty saika mainty, manondro fa levona ny ra ary hita alohan'ny vavonin'ilay alika ny olana.
Ny loko saika mainty ao amin'ny fivalanan-drà efa levona dia manasarotra ny mamantatra ny fandehanan'ny rà mandriaka, noho izany asaina manangona azy ireo amin'ny taratasy fotsy hahafahana mamaritra ny loko miaraka amin'ny marimarina kokoa. Azo atao ihany koa fa ny rà ao amin'ny fipetrahana dia miaraka amin'ny haavon'ny moka mahery kokoa na kely kokoa, ary amin'izany dia misolo tena karazana aretina hafa izy ireo.
Ny fisian'ny ra ao anaty tain-kaninina noho ny hematochezia
Rehefa misy ra vaovao ao amin'ny tain'alika misy na tsy misy moka, dia fantatra amin'ny hoe hematochezia izy io ary mety misy antony maro samihafa.
Na inona na inona antony, zava-dehibe hatrany ny fitondrana ny biby fiompy amin'ny consultation an'ny veterinary mba hanamafisana tsara ny niandohan'ny olana. Anisan'ireo mety hamaritana ireo valiny ireo:
Ny fisian'ny katsentsitra
Alika ary indrindra ny alika kely dia mora tohina toy ny zavamananaina rehetra. Ny mahazatra indrindra dia ny protozoa, nematodes, hookworms ary whipworms.
Parvo virus na parvovirus
Anisan'ireo vaksiny lehibe tokony homena ny alika kely ny parvo virosis. Raha manafika azy ny biby dia tsy hi-defecate amin'ny rà ihany, fa hanana ihany koa fivalanana atahorana ho tsy ampy rano ary mety fampisehoana.
Ny fahafatesan'ity aretina ity dia mitaky fitandremana tsara amin'ny vaksininy sy ny soritr'aretina.
Ny fahazarana sakafon'ny alika dia tena manokana ary tsy maintsy harahina mafy.
Raha omena sakafo izy ireo dia tsy maintsy misy kalitao ary manome ny otrikaina ilaina amin'ny fampandrosoana sy ny hetsiky ny biby. Raha ovaina ny marika dia tokony hatao tsikelikely hisorohana ny olana amin'ny fandevonan-kanina izay mitarika fivalanan-dra.
Ny fanomezana fatra voatetika izay misoroka ny fitohanana dia zava-dehibe amin'ny mety hisorohana ny antony mahatonga ny ra ao anaty fivalanan. Farany, tsy maintsy mitandrina ny zavatra apetraky ny alika ao am-bavany sy mihinana izy izay afaka manindrona ny tsinainy na ny tadiny rehefa mandeha maloto, toy ny sampana na kilalao plastika.
Na dia tsy fantatra mazava aza ny antony mahatonga an'io aretina io amin'ny alika, ny sasany dia mijaly amin'izany ary ny fambara dia fandehanan-dra. Tokony hitsidika ilay mpitsabo biby ianao mba hanondroana ny fitsaboana arahinao.
Ireo ratra ireo dia mitranga ao amin'ny lozisin'ny canine ary mety mahasalama na manimba. Amin'ireo tranga roa ireo dia tsy maintsy mamantatra ara-potoana mba handraisana ireo fepetra mifanaraka amin'izany.
Ny alika dia tsy voahilika amin'ity fahakiviana ara-pihetseham-po ity sy ireo tra-boina. Ny aretin-kozatra dia mety hateraky ny fiovan'ny fahazarana rehetra ny biby fiompy, toeram-ponenana vaovao na fampidirana mpikambana hafa na biby fiompy ao amin'ny vondrona fianakaviana.
Ny fisian'ny rà amin'ny alika alika noho ny mana
Rehefa misy ra ao amin'ny saika alika mainty Miaraka amin'ny fisehoana tara sy fofona maimbo, dia mety miatrika tranga melena izy ireo.
Tsy inona izany fa ny ra levona, izay no antony iheverana fa ny antony dia mitoetra eo ambonin'ny rafitra fandevonan-kanina. Ny antony mety mahatonga an'io aretina io dia mazàna:
Ny fampiasana fanafody anti-steroidal anti-inflammatory dia mety hiteraka vay ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina ny alika.
Tokony hotandremana tsara ny famatsiana ireo fanafody ireo, toy ny ny taim-borona canain sasany manome azy ireo ny fisehoan'ny mana, fa tsy ra izany ary mihena ny vokany rehefa tapitra ny fitsaboana ary ajanona ny biby fiompy.
Matetika ny poizina dia apetraka ao an-trano mba handrehitra biby mpikiky ary tsy mitandrina mba hiarovana ny biby fiompy tsy hiditra ao aminy. Manapoizina indrindra ny poizina voalavo ary miteraka fahalotoan-dra amin'ny alika ka mahatonga ny aretim-po tsy mahazo rà.
Fahasarotana aorian'ny fandidiana
Raha ny alika dia ao anatin'ny vanim-potoana fanarenana fandidiana ary mampiseho famantarana ny rà mandevon-kanina ao amin'ny seza, eo anelanelan'ny telo sy efatra andro aorian'ny fandidiana dia tokony Mifandraisa avy hatrany ny mpitsabo biby.
Raha misy ratra ny alika dia hilelaka azy mba hahazoany fanamaivanana. Mandritra izany dia handevona ny rà izy ary noho izany dia mivoaka miaraka amin'ny toetran'ny mane. Zava-dehibe ny famerenana azy io mba hialana amin'ny fahafaha-manao izany.
Fivontosana sy aretina
Ny alika dia mety hijaly amin'ny homamiadana ihany koa, ary ny fandehanan-dra amin'ny fivontosana dia mety haneho an'io soritr'aretina io. Afaka omen'i aretina mikraoba toy ny Clostridium na Campylobacter.
Na inona na inona antony na antony asehon'ilay alika fa misy famantarana ny ra ao amin'ny fipetahana dia tokony manatona mpitsabo biby foana ianao raiso ny fanadinana mifandraika amin'izany.
Ny fitsapana amin'ny laboratoara dia hanafoana ny fisalasalana ary hampiseho ny fitsaboana hanaraka. koa tena ilaina ny mitandrina amin'ny famahanana ny alika ary tsy manome afa-tsy sakafo avela hanome antoka ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ra ao amin'ny seza ao amin'ny alika
Maria Antonia Velez Gonzalez dia hoy izy:
Salama, ny alikako dia alika kely poodle ary efa 2 andro izay rehefa manidina izy dia mamarana rà vaovao sy ranon-javatra kely ny fitoerany, ara-dalàna ny sisa amin'ny poople. Mihinana tsara izy na dia voatery manery azy kely aza aho ary manome azy ny tanako. Raha tsy izany dia ara-dalàna fa mazava ho azy fa manahy aho, andao hizaha raha afaka manampy ahy ianao, na dia hoentiko any amin'ny mpitsabo biby aza izy, misaotra.
Valiny tamin'i Maria Antonia Velez González